Joe Biden oo qorsheynaya in siyaasad cusub lagu wajaho arimaha Yemen – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Joe Biden oo qorsheynaya in siyaasad cusub lagu wajaho arimaha Yemen
Maamulka cusub ee uu hoggaamiyo Madaxweynaha Dalka Mareyanka Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday in ay soo afjarayaan dhammaan taageerada Mareykanka ee ku aaddan howlgallada weerar ee ka socda dalka Yemen ee ay isku hayaan isbaheysiga uu hoggaamiyo Scuudiga iyo kooxda Xuutiyiinta ee dalkaasi.
Madaxweynaha ayaa sheegay in maamulkiisa cusub ay wadaan qorshe la doonayo in Mareykanku uu kaalin firfircoon kaga qaato joojinta dagaalada ka socda dalka Yemen ee saameeyay nolosha dad badan oo dalkaasi ah.
“Sacuudi Carabiya waxay wajaheysaa weeraro gantaalo iyo hanjabaado kale oo uga imanaya xoogagga ay taageeraan Iiraan sidaa daraadeed,waxaan sii wadaynaa inaan taageerno oo aan ka caawinno Sacuudi Carabiya inay difaacdo madax-bannaanideeda iyo midnimadeeda dhuleed iyo dadkeeda. ”ayuu yiri Joe Biden
Sacuudi Carabiya ayaa soo dhaweysay hadalada Biden, gaar ahaan sida ay uga go’an tahay difaaca dalka iyo wax ka qabashada hanjabaadaha ka dhanka ah dalkaasi.
Previous articleNoocyo cusub oo kaneeco ah oo laga helay dalka itoobiya kuna jiro deegaana soomaalida
Next articleHorjooge Al-Shabaab u qaabilsanaa qaraxyada oo lagu qabtay Gobolka Gaalgaduud